Xog: Kiiska horjoogihii Al-Shabaab ee maanta la qabtay oo si yaab leh lugaha ula galay Gaas - Hablaha Media Network
Xog: Kiiska horjoogihii Al-Shabaab ee maanta la qabtay oo si yaab leh lugaha ula galay Gaas
HMN:- Xog dheeri ah ayaa kasoo baxeysa madaxii howlgallada kooxda Al-Shabaab ee lagu qabtay magaalada Galkacyo, kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka Puntland ee loo yaqaano PSF-ta oo ay iskaashanayaaan ciidamada NISA , qeybta Galmudug.
Horjoogahan ayaa lagu magacaabaa Cabdirisaaq Xuseen Tahliil oo loo yaqaanay (Ina Calool Geel), waxaana lala qabtay afar kale oo kamid ah ururka Al Shabaab.
Waxaa hadda soo baxeysa in ninkan ay horay u qabteen ciidamada amniga Puntland, isagoo lagu lagu xukumay dil toogasho ah, kadib markii lagu qabtay Qaraxyo.
November 18, 2012 ayaa la qabtay Tahliin oo dadka qaybtiis u yaqaanaan Ilkacase iyo nin kale oo lagu magaciisu ahaa Maxamuud Nuux Adam (Abu-Xafsa) oo ahaa madaxa amniyaadka ee dilalka iyo Qaraxyada kooxdaas islamarkaana soo noqday Madaxii ilaalada hogaamiyihii la dilay ee Al Shabaab Axmed Cabdi Godane.
Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida Puntland, ayaa 02 March, 2013 Caloolgeel iyo Abuu Xafsa ku xukuntay dil toogasho, waxaase xukunkaasi ka soo horjeestay Odayaasha Dhaqanka ee Magaalada Gaalkacyo. Maamulkii Cabdiraxmaan Farole oo lagu cadaadiyay in uu soo sii daayo Caloolgeel, ayaa dhegaha ka fueystay.
Madaxweyne Gaas oo Maamulka Puntland la wareeegay bishii January ee sanadkii 2014-ka, ayaa amray in lasii daayo Caloolgeel, ka dib laba sano oo dil sugge uu ugu xirnaa xabsiga Garowe, waxaana arrintaas dabada ka riixayay mid kamid ah Xubnaha Baarlamanka Puntland oo lagu magacaabo Maxamud Dheere, kadib markii mallayshiyaad kasoo jeeda dhinaca Galmudug gacanta ku dhigeen xubno shacab ah oo ay sii dayntooda ku xireen Tahliil.
Sii daynta Tahliil iyo Abuu Xafsa, ayaa la dhaafsaday maxaabiis lagu haystay deegaanada Galmudug.
Madaxweyne Gaas ayaa dhagaha ka furaystay talooyin loo soo jeediyay oo ku aadan inuusan sii dayn ninkan ku xukuman dilka iyagoo ka digay khatarta ka dhalan karta hadii dib loo siiyo xorriyadiisa.
Majirto ilaa hadda wax war ah oo kasoo baxay maamulka Puntland taasoo ku aadan qabashada Tahliil iyo qaabka xukuumaddu ka yeeli doonto, maadama horay loo jabiyay xukunkii lagu riday.
Tahliil oo gacanta Puntland ka baxay 18 December, 2015 ayaa hadda kooxdaas ka hayay labo Jago oo kala ah; Madaxa Amniyaadka gobolka Mudug iyo sidoo kale Madaxa dhaqaalaha.